Sida guriga loogu beero hydroponics | Cusbooneysiinta Cagaaran
Dalagyada Hydroponic waa dalagyo in waxaa lagu gartaa maqnaanshaha carrada waxayna u soo baxaan badal beeraha soo jireenka ah.
Ujeedada ugu weyn ee dalagyada hydroponic waa in laga takhaluso ama la yareeyo waxyaabaha xaddidan ee koritaanka dhirta ee la xidhiidha sifooyinka ciidda, laguna beddelo taageerooyin kale oo beerashada iyo adeegsiga farsamooyin kale oo kala duwan oo bacriminta ah
Magaca dalagyadan waxaa lagu magacaabaa hydroponics, taas oo ah taageero aan firfircooneyn sida peat, ciid, quruurux meesha xididdada dalagga ayaa laalaa xalka nafaqada laftiisa.
Tani waxay keenaysaa xalka inuu yeesho dib-u-soo-celin joogto ah, ka-hortagga habka anaerobiosis ee sababi lahaa dhimashada dhaqsaha ah ee dhaqanka.
Sidoo kale dhirta waxaa laga heli karaa gudaha qolka PVC ama walxaha kale ee leh darbiyada daloolka leh (oo dhirta loo soo bandhigo), xaaladdan xididdadeedu waxay ku jiraan hawada waxayna ku kori doonaan mugdiga iyo xalka nafaqada leh waxaa loo qaybiyaa iyadoo lagu buufinayo cadaadis dhexdhexaad ah ama hooseeya.
Waad ku mahadsantahay daraasadaha saameynta deegaanka ee sanadihii la soo dhaafay lagu qaaday carrada iyo biyaha dusha sare iyo qulqulka ama waxqabadka beeraha laftiisa jawiga, waxaan ku xaqiijin karnaa in dalagyada hydroponic ama dalagyada aan ciid lahayn waxay leeyihiin astaamo aad u kala duwan marka la barbar dhigo dalagyada soo jireenka ah sida:
Awoodda martigelinta qashinka iyo wax soo saarka si loogu isticmaalo substrates koraya.
Xakamaynta adag ee qofka u gaarka ah biyaha iyo nafaqada, gaar ahaan marka lala shaqeynayo nidaamyada xiran.
Uma baahna meelo waaweyn, waana sababta ay gaar ahaan faa'iido ahaan uga hesho dhinaca dhaqaalaha.
Waxay siisaa xididdada waqti kasta oo leh heer qoyaan joogto ah, iyadoon loo eegin cimilada ama heerka koritaanka dalagga.
Waxay yareysaa halista sababtoo ah waraabka xad-dhaafka ah.
Ka fogow qashinka biyaha iyo bacriminta aan waxtar lahayn.
Hubin waraabka waraabka guud ee dhan.
Waxay si weyn hoos ugu dhigeysaa dhibaatooyinka cudurada ay keeneen cudurada cudurada keena.
Kordhinta wax-soo-saarka iyo hagaajinta tayada wax soo saarka
Si kastaba ha noqotee, dalagyada noocan ah soo saar taxane wasakh ah, gaar ahaan kuwa ay farageliyaan warshaduhu, oo ka imanaya:
Leaching nafaqada ee nidaamyada furan.
Ku daadinta walxaha qashinka.
Soo saarista alaabada jirka iyo gaasaska.
Isticmaalka tamarta dheeraadka ah sababtoo ah kuleylka iyo nidaamyada dayactirka habboon.
1 Noocyada dalagyada hydroponic
1.1 Farsamada Filimka Nutrient (NFT)
1.2 Nidaamka daadadka iyo bullaacadaha
1.3 Nidaamka faleebo oo leh ururinta xalka nafaqada
1.4 DWP (Dhaqanka Biyaha Qoto Dheer)
2 Faa'iidooyinka deegaanka ee nidaamka sii kordhaya ee hydroponic
3 Kala soocidda alaabada
3.1 Noocyo dabiici ah
3.1.2 Jilif Wood
3.2 Suboreyaasha aan caadiga ahayn
3.2.1 Dhagaxa dhagaxa ah
3.2.2 Xumbada Polyurethane
4 Diyaarinta xalalka nafaqada
5 Sida Loo Sameeyo Nidaamka Koraaya Hydroponic ee Guriga Lagu Sameeyo
Noocyada dalagyada hydroponic
Farsamada Filimka Nutrient (NFT)
Waa nidaam wax soo saar dalagga aan ciidda lahayn halkaas oo xalka nafaqadu dib u soo celinayo.
NFT waxay ku saleysan tahay wareeg joogto ah ama goos goos ah oo ah xaashida khafiifka ah ee xalka nafaqada iyada oo loo marayo xididdada dalagga, iyada oo kuwan aan lagu dhex milmin wax substrate ah, sidaa darteed waxaa taageeraya kanaalka wax-soo-saarka, gudaha kaas oo xalka uu ku sii socdo heerarka hoose ee culeyska.
Nidaamku wuxuu oggol yahay keyd ballaaran oo biyo iyo tamar ah iyo sidoo kale xakameyn sax ah oo ku saabsan nafaqada dhirta iyo sidoo kale wuxuu awood u leeyahay in lagu nadiifiyo ciidda lana hubiyo isku mid ahaanshiyaha u dhexeeya nafaqooyinka dhirta.
Si kastaba ha noqotee, daraasad ku saabsan kala-baxa nafaqada waa in la sameeyaa, iyo sidoo kale inta kale ee xuduudaha jirka ee jirka sida pH, heerkulka, huurka ...
Nidaamka daadadka iyo bullaacadaha
Nidaamkani wuxuu ka kooban yahay saxanno halka dhirta la beeray ay ku yaalliin substrate aan firfircooneyn (luul, quruurux, iwm) ama dabiici ah. Baakidhkan waxay ku qulqulayaan biyo iyo xalal nafaqo leh, kuwaas oo nuugaya substrate-ka.
Marka nafaqooyinka la haysto, baakidhyada ayaa la miiraa oo dib loogu fatahaa xalalka gaarka ah.
Nidaamka faleebo oo leh ururinta xalka nafaqada
Waxay la mid tahay waraabka dhaqameed ee dhaqameed laakiin leh kala duwanaanshaha taas xad-dhaaf ah ayaa la ururiyaa oo dib loogu celiyaa dhaqanka iyadoo loo eegayo baahiyaha isku midka ah.
Uruurinta xad-dhaafka ah ayaa suurtagal ah iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in dalagga uu ku yaal jaranjaro.
DWP (Dhaqanka Biyaha Qoto Dheer)
Kani waa nooca beerashada ee aad ugu eg tii hore loo isticmaali jiray.
Waxay ka kooban tahay barkado ka kooban dhirta waxaa la saaraa saxan, oo xididdada uga tagaya taabashada biyaha xalalka lagu daray. Ahaanshaha biyo fadhiya, waxaa lagama maarmaan ah in lagu oksijiyo iyadoo la adeegsanayo bambooyin la mid ah kuwa ku jira quraaradda quraaradda.
Faa'iidooyinka deegaanka ee nidaamka sii kordhaya ee hydroponic
Waxaan horay u aragnay xoogaa faa iidooyin ah dalagyada hydroponic laakiin waa inaan sidoo kale aragnaa faa'iidooyinka deegaanka ee ay bixin karaan, sida:
Xoreynta jiritaanka haramaha ama cayayaanka dhirta laftooda.
Waxsoosaarka noocan ah waa mid aad waxtar u leh in lagu isticmaalo dhulka durba aad u duugoobay ama ku yar maadaama uu u roon yahay dhulka intiisa kale.
Sida aysan ugu xirnayn xaaladaha cimilada, ayay markaa dammaanad-qaadaysaa noocyada dhirta inta lagu jiro sanadka.
Kala soocidda alaabada
Sidii aan horayba u soo sheegay, waxaa jira qalab kala duwan oo loo sameeyo dalagga hydroponic.
Xulashada laga sameeyay hal shay ama mid kale waxaa go'aamiya dhowr arrimood sida helitaankiisa, kharashka, ujeedka soo saarista dalagga la sheegay, guryaha kiimikada jirka, iyo kuwo kale.
Noocyadan hoose waxaa loo kala saari karaa substrates dabiici ah (hadday tahay mid dabiici ah, iskudhis, wax soo saar ama qashinka beeraha, warshadaha iyo qashinka magaalooyinka) iyo on maaddooyinka aan dabiici ahayn ama macdanta (asal ahaan dabiici ah, la beddelay ama la daweeyey, iyo qashinka warshadaha ama wax soo saar).
Noocyo dabiici ah
Dhexdooda waxaan ka heli karnaa mobs iyo qori caaradii.
Waxay ka kooban yihiin hadhaagii ajada ee dhirta kale, taas oo waxay ku jiraan hawsha qunyar-socodka carbonization sidaa darteedna ay meesha uga baxday oksijiin biyo saa'id ah awgood. Natiijo ahaan, waxay awoodaan inay ilaashadaan qaabdhismeedkooda jirka muddo dheer.
Waxaa jiri kara 2 nooc oo peat ah, taas oo kuxiran asalka samaysankooda maadaama haraaga dhirta lagu keydin karo nidaamyo kaladuwan oo deegaanka ah.
Dhinac, waxaan ka leenahay kooxo dhireed ama eutrophic ah dhanka kalena, waxaan leenahay Sphagnum ama mobs oligotrophic. Kuwan dambe ayaa ah kuwa ugu badan ee maanta la isticmaalo, sababo la xiriira qaybahooda dabiiciga ah, warbaahinta dhaqanka ee ku koraan dheryaha. Tan waxaa ugu wacan sifooyinkeeda-kiimikaad-kiimikaad ee wanaagsan.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay jirto xaqiiqda ah in ku dhowaad 30 sano mobs ay ahaayeen waxyaabaha inta badan loo isticmaalo sidii substrates, marba marka ka dambaysa waxaa lagu beddelay kuwa aan dabiici ahayn, oo aan hoos ku arki doonno.
Intaas waxaa sii dheer, keydka noocan ah substrate-ka waa kuwo xadidan oo aan dib loo cusbooneysiin karin, sidaa darteed isticmaalkeeda xad-dhaafka ah wuxuu sababi karaa saameyn deegaanka aad u muhiim ah
Magacaabistani waxay ka kooban tahay jilif gudaha iyo jilifta kore ee geedaha.
Kuwa ugu badan ee la isticmaalo waa jilifyada geedaha, in kasta oo jiqda noocyada kala duwan ee geedaha sidoo kale la isticmaali karo.
Cabaqyadan Waxaa laga heli karaa iyaga oo cusub ama horay loo soo saaray.
Midka hore wuxuu sababi karaa yaraanta nitrogen-ka iyo sidoo kale dhibaatooyinka phytotoxicity, halka ciyo isku-dhafan oo la kariyo ay si aad ah u yareeyaan dhibaatooyinkaas.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay jir ahaaneed waxay kuxirantahay cabirka qaybta, laakiin dabacsanaanta badanaa waxay ka badan tahay 80-85%.
Suboreyaasha aan caadiga ahayn
Noocyada substrates-ka waxaan ka heli karnaa dhogorta dhagaxa ah, xumbada polyurethane, cambaarta perlite iyo kuwa kale, oo aanan si qoto dheer u faahfaahin doonin, laakiin waxaan ku siin doonaa garaacis yar si aad fikrad yar u yeelan karto. Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah, ha ka waaban inaad faallo ka bixiso.
Dhagaxa dhagaxa ah
Waa macdan warshad laga beddelay. Asal ahaan waa aluminium aluminium leh joogitaanka kalsiyum iyo magnesium, oo ay weheliso raadadka birta iyo manganese.
Awood haynta biyaha sare.
Shuruudaha xakamaynta saxda ah ee nafaqada nafaqada iyo macdanta.
Waxay noqon kartaa kansar inkasta oo aan cilmi ahaan loo xaqiijin.
Waa shey balaastig ah oo jilicsan oo ay sameeyeen iskudubbooyin goobooyin, oo sidoo kale loo yaqaan magacyada iskudhafka ah ee caag xumbo Spain.
Guryaha ay biyuhu leeyihiin.
Qashinka qashinka, sida dhogorta dhagax.
Waa aluminium aluminium ah oo asal ahaan ka soo jeeda volcanic.
Guryaha jirka oo wanaagsan.
Waxay fududeeysaa maareynta waraabka waxayna yaraynaysaa halista neef qabatin ama biyo yaraanta.
Suurtagalnimada nabaad-guurka inta lagu jiro wareegga beerashada, luminta xasilloonida granulometric, oo u roonaan karaya biyaha haanta dhexdeeda.
Waxyaabaha dabeecadda siliceous iyo halabuurka isbeddelka, taas oo kuxiran qaybaha uu ka kooban yahay dhagaxa silicate asalka ah.
Qiimo jaban wadamada laga helo tiro badan.
Dhibaatooyinka ka dhashay isticmaalka ciidda tayada hooseeya qaarkood
Diyaarinta xalalka nafaqada
Diyaarinta xalalka nafaqada waxay ku saleysan tahay a dheelitirka hore ee u dhexeeya nafaqooyinka biyaha waraabka iyo qiimaha ugu wanaagsan ee dalaggaas.
Xalalkan nafaqada leh waxaa laga diyaarin karaa xalka kaydka, oo leh feejignaan 200 jeer ka sarreysa xalka ugu dambeeya ama qiyaastii 1.000 jeer ka sarreeya marka loo eego macroelements iyo microelements siday u kala horreeyaan.
Intaas waxaa sii dheer, pH-ka xalalkan waxaa lagu hagaajiyaa inta udhaxeysa 5.5 iyo 6.0 iyadoo lagu darayo NaOH ama HCl.
Sida Loo Sameeyo Nidaamka Koraaya Hydroponic ee Guriga Lagu Sameeyo
Hoos waxaa ku yaal sida loo dhiso nidaam koraya hydroponic oo loogu talagalay 20 saladood oo leh NFT (farsamada filimka nafaqada leh) ee aan horay u soo aragnay.
Waxaan arki karnaa in qalabka fudud ee guryaha lagu sameeyo iyo agabyada caadiga ah aan ku dhisi karno dhaqankeenna hidde-biyoodka.
Fiiro gaar ah; fiidiyowgu ma laha wax muusig ah sidaa darteed waxaan kula talinayaa qaar ka mid ah raadadka muusikada asalka ah si aysan ugu muuqan mid culus in la arko.
Fiidiyowgaan waxaa sameeyay Kulliyadda sayniska ee UNAM ee ku taal Workshop Hydroponics.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Ecology » Dalagyada Hydroponic, maxay yihiin iyo sida mid looga sameeyo guriga
Waa salaaman tahay, horay ayaan u arkay, laakiin xididka salartu had iyo jeer wuxuu noqdaa bunni markay tahay 12 maalmood ka dib markii la beeray saladhka, waayo?
Jawaab Katherine Hidalgo
Mawduucani waa mid aad u xiiso badan, runti waan ka fuliyay guriga dhexdiisa laakiin dhibaato ayaa i haysata, saladhyadaydu way sii dheeraanayaan, anigu garan maayo sababta. Qof baa i caawin kara ??